Itoophiyaan zayita boba'aa Sawudiirraa liqiin dabalataan gaafatte - BBC News Afaan Oromoo
Itoophiyaan yeroo ammaa rakkoo sharafa alaa keessa jirtu kanaaf zayita boba'aa waggaa tokkoof ishee ga'u liqaadhaan Sawud Arabiyaarraa akka dhiyaatuuf gaafachuu ishee Itti Gaafatamaa Waajira Ministeera Muummee Obbo Fitsuma Araggaa heeruun Rooyitersitu gabaase.
Zayita boba'aa galchuudhaaf waliin dubbachaa jirra. Dhimmi kun gadi fageenyaan ammallee ilaalamee hin dhumne. Akka sagantaatti kan qabameefi dhiyeessi zayita boba'aa akka jiraatu kan dandeessisu akka ta'e gabaasni kun ni mullisa.
Rakkoo hir'ina dolaaraafi daandiirraa kan ka'een meeshaan toonii miliyoona 1.6tti tilmaamamu Ulaa Galaanaa Jabutiirratti tuulamee akka jiru gabaasni kun dabalee addeesseera.
Itoophiyaan erga dhiyeenya kanaa rakkoo sharafa alaa keessa akka jirtu ibsuudhaan Ministirri Muummee namoonni maallaqa biyya alaa harkatti qabatanii jiranis gara baankii geessanii akka jijjiiraniifis gaafataniiru jedha gabaasni kun.